N ingbo Shuangyu (Samewe), sida mid ka mid ah Machine Tolidda thefamous Computerized Flat saarayaasha, ma aha oo kaliya dan tirada in aan soo saaro, laakiin sidoo kale tayada, waxaan leenahay investedquite wadarta abig lacag qalab advancedprocessing ah si kor loogu qaado machinequality ah. Waxaan tababarka shaqaalaha qaataan si dhab ah si loo hubiyo iyo in la wanaajiyo tayada sheyga.
SY52-S waa mashiinka dhaqaale oo wax ku ool ah kartoo for ourclients. Waxay leedahay faa'iidooyinka qiimaha macquulka ah, oo tayo leh oo deggan andthe helayaa maal-gaaban ee adpots mashiinka outlay.The magaalada si buuxdanidaam computer-gacanta for wareejinta, Xooji iyo dhakhsoqaadee soo laabtay iyo sidoo kale habka ay gacanta ku motor ee colorchanging. Waxay bixisaa qaab deggan iyo xawaaraha sare iyogaadhaysaa in hawlaha ka weyn, sida intarsia, sticth Caraabaah, iyo sidoo kale-dheelitiran, dhismayaasha cable, cross-Tolmada, jacquard iyo ECT.
SY52-2S adpots xirtey hal bar cirbad aad u wanaagsan oo dual rackingfor irbad aan dhab ahayn bar, dib-xawaaraha sare ee ay si waxtar leh loo kordhiyo xawaaraha thekitting 20% -30%. Labada dhinac ee grippers la jaro
macnaheedu waa wax ku ool ah loo yareeyo dun qashinka iyo in la wanaajiyo taxane productivity.This waa technology useddigital si loo gaaro qaababka oftransfer, lafaha misgaha, pointelle, intarsia, jacquard, qaabeynta muuqata, qaabeynta maqan iyo hawlaha kale ee hannaanka caadiga ah kitting, waxaa alsocan xidhantay jacquard multi-leh midab, intarsia, cable iyo qaab-dhismeedka pointelle qaababka aan joogto ahayn.
SY52-3S adpots xirtey hal bar cirbad aad u wanaagsan oo dual rackingfor irbad aan dhab ahayn bar, dib-xawaaraha sare ee ay si waxtar leh loo kordhiyo xawaaraha thekntting 20% -30%. Labada dhinac ee grippers la jarida hab wax ku ool ah loo yareeyo dun qashinka iyo mariso wax soo saarka. Taxane waxaa loo isticmaalaa technology digital si ay u gaaraan astaamaha kala iibsiga, lafaha misgaha, pointelle, intarsia, jacquard, qaabeynta muuqata, qaabeynta qarsoon iyo hawlaha kale ee tolida hannaanka caadiga ah, waxa kale oo u midoobay kartaa joogto ahayn multi-midab jacquard, intarsia, cable iyo pointelle nidaamyada qaab-dhismeedka .
" Tayo wanaagsan, adeegga wanaagsan " had iyo jeer waa rogo oo iyo credo. Waxaan qaadan dadaal kasta si loo xakameeyo oo tayo leh, xirmada, shabbadeeysa iwm iyo QC hubin doonaa si faahfaahsan kasta inta lagu guda jiro soo saarka iyo ka hor shixnad. Waxaan doonaya in la dhiso xiriir ganacsi dheer leh, kuwa ku doondoonaya wax soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan yihiin. Shirkadda Our tiiriyaa ruuxa "hal-abuurnimo, wada noolaanshaha, shaqada kooxda iyo in la wadaago, tamashle, horumarka waaqiciga". Wax naga siiya fursad oo aan cadeeyo doonaa awood.
Cinwaanka: No. 118 Shun Tai Road, Jiao Chuan Street, Degmada Zhenhai, Ningbo City, Shiinaha